Beijing dethrones New York City dị ka Billionaire Isi Obodo nke Worldwa
Pịa iji sonyere ihe omume na-abịa n'ihu
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ banyere njem China » Beijing dethrones New York City dị ka Billionaire Isi Obodo nke Worldwa
Gbanyụọ Mgbasa ozi (pịa)
Na-agbasa News Travel • Business Travel Akụkọ • Akụkọ banyere njem China • etn • Feature Nkeji edemede • Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa • Ozi Njem Okomoko • Ndị njem na njem nleta • Onsrụ Ọrụ Dịịrị Tourism News • Tourism • Akụkọ Njem Nleta • Travel • Njem njem • Akụkọ njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • USA Akụkọ Akụkọ
Ndị ọgaranya bara ọgaranya n’ụwa bara ọgaranya karịa n’afọ gara aga n’agbanyeghi ọdachi na akụ na ụba COVID-19
Isi obodo China ghọrọ ụlọ ọrụ billionaire ọhụrụ zuru ụwa ọnụ
Beijing nwetara 33 billionaires ọhụrụ na 2020, na-eweta ngụkọta ya na 100
Obodo ise nke China nwere otu n'ime 10 kacha elu ụwa na ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ego
Dabere na Forbes kwa afọ World Billionaires Ndepụta maka 2021, na oge mbụ mgbe Beijing aghọwo ọhụrụ zuru ụwa ọnụ ijeri ijeri ehiwe.
Isi obodo China nwetara 33 billionaires ọhụrụ na 2020, na-eweta ngụkọta ya na 100. Na doin so, Beijing jiri obere ihe merie New York City na Big Apple gbakwunyere naanị ndị billionai asaa ọhụrụ n'otu oge ahụ ma nwee ngụkọta nke ndị bi billion 99 bi na 2020.
"China laghachitere ngwa ngwa site na nsogbu ya na-efe efe, na-agbadata site na Nke 4 ruo nke 1 na ndepụta anyị kwa afọ," ka Forbes kwuru.
Na mkpokọta, obodo ise nke China nwere otu n'ime 10 kacha elu ụwa nwere ọtụtụ ndị nwere ego. Hong Kong nọ n'ọnọdụ nke atọ na 80 billionaires, Shenzhen na nke ise na 68, na Shanghai na nke isii na 64. Hangzhou tinyere 21 billionaires, iji ruo Singapore maka nọmba 10.
Isi obodo UK, London, gụkwara ọnụ ọgụgụ ndị nwe ijeri mmadụ asaa, ọ bụ ezie na o si na nke ise daa na nke asaa dị ka “ụlọ kasị ewu ewu maka ihe ọghọm iri.” Chịkọta 10 kachasị elu, Moscow si na nke atọ gaa nke anọ, ebe Mumbai na San Francisco - ụlọ ọ bụla nke ndị bi na 48 - jikọtara na Nke 8.
Dabere na akụkọ ahụ, onye mbịara amamịghe nke Beijing bụ Wang Ning dị afọ 34, onye azụmahịa azụmaahịa ya bụ Pop Mart gara n'ihu ọha na Hong Kong na Disemba 2020. ihe ruru ijeri $ 35.6. ”
Ndị ọgaranya bara ọgaranya n'ụwa bara ọgaranya karịa n'afọ gara aga n'agbanyeghị ọgbaghara ọrịa na akụ na ụba COVID-19, ka Forbes kwuru. N’ụwa nile, mmadụ 660 ghọrọ billionaires ọhụrụ, na-ewetara ụwa niile ijeri 2,755 billionaires ọnụ ahịa ijeri $ 13.1.
Jamaica na ngwụsị izu Ista: Nnukwu mmụba na ndị mbata
Ego Boeing nwetara ruru ihe dịka 50 pasent kemgbe 2018
Atụmatụ Wyndham & Resorts na-eme ngwa ngwa Asia ...
Alaska Airlines gbasaa ọrụ na ọnụnọ na Santa ...
American ụgbọ elu abanye na afọ nke abụọ dị ka Official ...
Sky Airline CEO na nsogbu COVID na South America
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na osimiri dị iche iche na-ebuli elu ...
Ikpe gbasara ọrịa ojoo Italy na-efu efu